Momba an'i Anbotek
Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited (nohafohezina hoe Anbotek, Stock code 837435) dia vondron'antoko fahatelo feno, mahaleo tena, manana fahefana amin'ny serivisy serivisy manerana ny firenena.Ny sokajy vokatra amin'ny serivisy dia misy ny Internet of Things, vokatra fifandraisana 5G / 4G / 3G, fiara marani-tsaina sy ny singany, angovo vaovao, fitaovana vaovao, aerospace, fitaterana an-dalamby, fiarovam-pirenena sy indostrian'ny miaramila, faharanitan-tsaina artifisialy, tontolo iainana ekolojika ary sns. serivisy ara-teknika sy vahaolana ho an'ny fitiliana, fanamarinana, debugging, fikarohana sy fampandrosoana mahazatra, ary fananganana laboratoara ho an'ny andrim-panjakana, mpanjifa marika, mpividy vahiny ary mpamatsy e-varotra miampita sisintany.Amin'ny maha-fitaovana fitiliana sy fanamarinana an-tanànan'i Shenzhen ho an'ny sehatry ny serivisy teknolojia ho an'ny angovo vaovao, angovo angovo, mpanamboatra, varotra ivelany, vokatra elektronika ary Internet of Things.Anbotek dia nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa orinasa maherin'ny 20.000 manana serivisy avo lenta nandritra ny 15 taona.Ao amin'ny 2016, Anbotek dia nahomby tamin'ny lisitry ny National Equalities and Exchange Quotations (Nohafohezina ho NEEQ) ary izy no ivon-toeram-panadinana feno voalohany ao Shenzhen izay nitanisa tao amin'ny NEEQ.
Anbotek dia neken'ny CNAS, CMA ary NVLAP (kaody laboratoara 600178-0), eken'ny CPSC, FCC, UL, TUV-SUD, TUV Rheinland CBTL, KTC ary fikambanana sy fikambanana iraisam-pirenena malaza hafa.Anbotek dia laboratoara CCC sy CQC voatondro.Ny tatitra momba ny fitsapana sy ny mari-pankasitrahana dia eken'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 ao anatin'izany ny USA, UK ary Alemana sy ny sisa. Anbotek dia manana fepetra hanome angon-drakitra tsy miangatra.Ekena iraisam-pirenena ny valim-panadinana sy ny tatitra.
Fotoana ho an'ny tsena
Isan'ny mpanjifa mitambatra
Base sy laboratoara
Sampandraharaha sy toeram-pivarotana
Ny mpiasan'ny Anbotek dia manohana ny tsy fivadihana ary mihevitra ny tsy fivadihana ho fitsipika fototra.Ny mpiasan'ny Anbotek dia manolo-tena hanome angona sy tatitra ara-tsiansa sy marina.
Ny mpiasa Anbotek dia manana tanjona mitovy, hetsika tsy miovaova ary fifanohanana.Ny mpiasa Anbotek dia hiara-hiasa hanatratra ny tanjona.
Ny mpiasan'ny Anbotek dia manolo-tena amin'ny famoronana lanja sy famolavolana vahaolana teknolojia vaovao ho an'ny fangatahana tsena.Anbotek dia mikendry ny lohalaharana amin'ny fivoaran'ny teknolojia vaovao sy ny fitazonana ny fitarihana ara-teknolojia.
Ny mpiasan'ny Anbotek dia mandinika ny filan'ny mpiasa, mitondra ny mpiara-miasa amin'ny fahatsoram-po, ary ny olona Ambo dia mifantoka amin'ny filan'ny mpanjifa ary manompo ny mpanjifa amin'ny teknolojia matihanina.
Ny vahoaka Anbotek dia manolo-tena amin'ny fananganana fikambanana fianarana sy fanatsarana ny tenany.Ny vahoaka Anbotek dia miara-mitombo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa mba hahatsapa ny hasarobidin'ny tenany.
Anbotek · Fahitana
Lasa mpitarika hajaina indrindra amin'ny indostrian'ny fitiliana sy fanamarinana ao an-toerana ao Shina
Mamaha ny olana amin'ny fiparitahan'ny fanamarinana vokatra Shinoa
Mamorona sanda ho an'ny mpanjifa ary mamorona famirapiratana miaraka amin'ny mpiasa
Anbotek · Iraka
Mba hiarovana ny fahasalaman'ny olombelona sy ny fiarovana, fiarovana ny tontolo iainana, fitsitsiana angovo ary serivisy
Manome serivisy tokana ho an'ny mpanjifa eo amin'ny sehatry ny fisafoana, famantarana, fitiliana ary fanamarinana
• Nandefa ny fandaharana "ny horonan-tsarimihetsika amin'ny finday" ny Station TV Satellite Shenzhen "SPOT NEWS"
• Nitsidika an'i Hunan Anbotek ny ben'ny tanàna sy ireo mpitarika hafa ao amin'ny tanànan'i Changsha.
• Namoaka lahatsoratra manokana momba ny "Anbotek Strictly servers for the quality of Shenzhen special economy zone" ny Nanfang Daily.
• Nandalo indray ny fanombanana ny US NVLAP (FCC accreditation) teny an-toerana i Anbotek.
• Nahazo ny anaram-boninahitra tamin'ny marika malaza Shenzhen faha-6 i Anobek.
• Lasa ivon-toeram-panamarinana kalitaon'ny Chine CQC Contracting Laboratory.
• Nomem-boninahitra avy amin'ny Komitin'ny Siansa momba ny Siansa sy ny Teknolojian'ny Fanavaozana ny Teknolojian'ny Sehatry ny Fanavaozana Ara-teknika.
• Nomem-boninahitra avy amin'ny Vaomieran'ny Siansa sy ny Teknolojia Shenzhen Ny rafi-pitantanana angovo vaovao amin'ny angovo azo avy amin'ny angovo.
• Hunan Anbotek dia natsangana ary napetraka tamin'ny asa azo ampiharina, ary nanomboka niditra tao amin'ny sehatry ny fitiliana ny tontolo iainana i Anbotek.
• Nosoratana anarana ny serivisy teknika Anbotek ary nanokatra toko vaovao ao amin'ny fizarana serivisy laboratoara Anbotek.
• Nahazo ny "fikambanana fitsirihana antoko fahatelo atokisana indrindra ao Shina" avy amin'ny Fikambanan'ny Fitantanana kalitaon'ny China Electronics.
• Anbotek Shenzhen dia nahazo ny voninahitry ny orinasa nasionaly teknolojia avo lenta.
• Sampan-draharahan'ny vondrona-Zhongjian fitaovana orinasa nahazo ny voninahitry ny firenena teknolojia avo orinasa.
• Voatanisa soa aman-tsara ao amin'ny National Equities Exchange and Quotation(NEEQ), kaody stock: 837435.
• Nahazo ny mpiara-miombon'antoka tsara indrindra amin'ny taona ao amin'ny faritra atsimon'i Shina an'ny vondrona TUV SUD nandritra ny 7 taona nisesy.
• Komitin'ny Siansa sy Fanavaozana ny Teknolojia Shenzhen Maker Service Platform Honor.
• Fampifangaroana sy fividianana orinasa fitaovana Zhongjian, serivisy vokatra mifandraika amin'ny fitaovana azo itokisana amin'ny tontolo iainana R & D sy ny famokarana.
• Nahazo ny mari-pahaizana momba ny laboratoara CCC izay tantanin'ny Fitantanana ny Fanamarinana sy ny Fankatoavana Nasionaly.
• Nahazo ny voninahitry ny mpiara-miasa tsara indrindra avy amin'ny KTC Korea.
• Nahazo ny voninahitra avy amin'ny Vaomiera ara-toekarena sy ara-barotra any Shenzhen, Sehatra tolotra varotra ivelany.
• Ny seha-pitsapana momba ny bateria angovo vaovao sy ny serivisy fanavaozana fanamarinana dia nambaran'ny Komitin'ny Siansa momba ny Siansa sy ny Teknolojian'ny Siansa sy ny Teknolojian'ny Shenzhen. Tetikasa vaovao ho an'ny fanehoan-kevitry ny daholobe.
• Nanangana Dongguan Anbotek.
• Nahazo ny voninahitry ny orinasa teknolojia avo lenta nasionaly.
• LED jiro vokatra angovo fahombiazana sy ny fahazavana fampisehoana ny teknolojia ho an'ny daholobe sehatra fanompoana nahazo ny voninahitry ny fanavaozana fikambanana ny Nanshan District Siansa sy ny Teknolojia Birao.
• Guangzhou Anbotek dia nisoratra anarana sy naorina.
• Nisoratra anarana sy naorina i Ningbo Anbotek.
• Nomem-boninahitra ny Minisiteran'ny Siansa sy ny Teknolojia's SME Technology Innovation Fund.
• ny tsara indrindra isan-taona mpiara-miombon'antoka ny TUV SUD Group Atsimo Shina.
• Nahazo ny mari-pankasitrahana avy amin'ny SME Technology Innovation Fund an'ny Minisiteran'ny Siansa sy ny Teknolojia ny fitiliana vokatra elektronika sy ny sertifika.
• Nahazo ny fanomezan-dàlana avy amin'ny fikambanana KTC any Korea, ary ny isan'ny orinasa KC no laharana voalohany amin'ny indostria.
• Anbotek Pengcheng dia nisoratra anarana ary naorina tao amin'ny Distrikan'i Shenzhen Baoan.
• Nahazo alalana voalohany avy amin’ny CNAS (Certificat No.: L3503) izy io ary laboratoara tsy miankina voalohany nahazo izany fankatoavana izany.
• Tamin'ny May 27, 2004, ny mpanorina ny orinasa, Mr. Zhu Wei, dia nanangana Anbotek Testing tao Shenzhen Nanshan Science and Technology Park.